Ny fitomboana tampoka amin'ny mponina an-tanàn-dehibe sy ny fanitarana ireo tanàna dia nahita fitomboan'ny filan'ny Hopitaly, birao, foibe fiantsenana, ozinina ary trano. Mba hanampiana izany, ny fiovan'ny toetr'andro dia nanery ny HVAC ho filàna fivelomana sy fiainana salama ho an'ireo olona mitombo hatrany ao an-tanàna.
Ny fahombiazan'ny angovo izao dia fepetra lehibe takiana amin'ny fametrahana HVAC vaovao. Ny governemanta manerantany dia nametraka fitsipika noforonina mba hampirisihana ny fandraisana ireo rafitra HVAC izay manaraka ny fenitra indostrialy momba ny fahombiazan'ny angovo.
Ny indostrian'ny HVAC dia mpanjifa lehibe ny angovo sy ny rano, vokatr'izany dia miatrika ho avy hendry izy ary mandroso amin'ny haitao manan-tsaina. Anisan'izany ny rafitra fanaraha-maso ny fanjifana angovo trano sy ny fanaraha-maso ny fivoahan'ny angovo an'ny rafitra HVAC.
Eto no mitana andraikitra lehibe ny vokatra SPL, na ho an'ny fanamainana, rivotra, rivotra na fampangatsiahana, ny SPL dia manana ny vahaolana mahomby indrindra amin'ny fifanakalozana hafanana. Ho an'ny rafitra Cooling ao amin'ny Distrika mankany amin'ny vahaolana ara-indostrialy, ny fitaovantsika dia miantoka ny angovo sy ny famonjena rano ho an'ny mpanjifany.
Raha te hahalala bebe kokoa ny fampiharana dia miangavy anao hifandray amin'i Sales Representative anay.